အက္ခရာ ငါးစင်း ၀တ္ထုတိုစုစည်းမှု စာအုပ်မိတ်ဆက်ခြင်း-သော်ဇင်(လွိုင်ကော်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အက္ခရာ ငါးစင်း ၀တ္ထုတိုစုစည်းမှု စာအုပ်မိတ်ဆက်ခြင်း-သော်ဇင်(လွိုင်ကော်)
အက္ခရာ ငါးစင်း ၀တ္ထုတိုစုစည်းမှု စာအုပ်မိတ်ဆက်ခြင်း-သော်ဇင်(လွိုင်ကော်)
Posted by သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) on Aug 16, 2014 in Arts & Humanities, Literature/Books | 13 comments
အက္ခရာ ငါးစင်း ၀တ္ထုတိုစုစည်းမှု စာအုပ်မိတ်ဆက်ခြင်း
ရွာသူရွာသားများကို ကြုံတုန်းလေး မာကက်တင်းဝင်သွားတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်။ တကယ်တော့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကို ကြော်ငြာဝင်သွားတာလို့သဘောထားပေးဗျာ။ အထက်က မျက်နာဖုံးလေးကိုတွေ့တဲ့အခါ ဒါ တို့ရွာသားလို့ ပြောမိသွားမယ်ထင်ပါတယ်။ ခုချိန် ဒီစာအုပ်လေးဖြစ်မြောက်လာတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်ဘယ်ကနေ စတင်ဝင်ရောက်စာတွေရေးဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ပြန်အမှတ်ရတယ်ဗျ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ခန့်မှန်းခြေ ၂၀၁၀ လောက်မှ ရွာထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် ရွာသူ ရွာသားတွေရဲ့အားပေးဖတ်ရှုမှုနဲ့ ကြိုးစားရေးသားဖြစ်လာရင်က ခုဆို ရည်မှန်းထားတဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်အထိရောက်ခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရခဲ့ပါတယ်။
ခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လွိုင်ကော်က စာရေးသူ ကလောင်ရှင် (၅)ဦးရဲ့ “အက္ခရာ ငါးစင်း” ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတို စုစည်းမှုစာအုပ်လေးကို အကောင်အထည်ဖော် စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ စာရေးသူတစ်ဦးလျှင် ၀တ္ထုတို (၃)ပုဒ်ပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းများထက်မှာ ဖော်ပြပြီးသား ၀တ္ထုများပါသလို အသစ်များလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘ၀မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ရွာသူရွာသားများကို မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ရော ( အားပေးဖတ်ရှုပေးစေလိုတဲ့ သဘောနဲ့ရော( ဟီး) ကြိုတင် ကြေငြာပေးလိုက်တာပါ။ သော်ဇင်(လွိုင်ကော်)ရယ်လို့ဖြစ်လာစေတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကိုလည်း မှတ်မှတ်ရရနဲ့သတိတရသိစေချင်လို့ပါ။
လာမယ့်စက်တင်ဘာမှာ ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဂေဇက်ရွာသူ ရွာသားများကို စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုဖိတ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုတက်ရောက်ပေးနိုင်မည့်သူများကို ကျွန်တော်က နာမည်များနှင့်တကွ ဖုန်းနံပါတ်များကိုပါ ကြိုတင်ပြီးတောင်းဆိုထားချင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကြိုတင်ဖိတ်ကြားဖို့စီစဉ်စရာများကို စီစဉ်နိုင်ဖို့ပါ။
ဒီပို့စ်အောက်မှာ နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်များပေးဖို့အဆင်မပြေရင်လည်း ကျွန်တော်ရဲ့
Facebook Account ကို Add ပြီး Message မှတဆင့်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
ဂေဇက်ရွာသူ ရွာသားများနဲ့ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမဆုံဖူးသေးလို့ပါ။ မန်းလေးက လေး ကိုပေါက်(မန္တလေး)၊ ဦးမာဃ၊ ဗုံဗုံ၊ တို့နဲ့ပဲဆုံဖူးပါသေးတယ်။ ခုလည်း ရန်ကုန်က ဂေဇက်ရွာသူရွာသားများနဲ့ ဆုံချင်သေးလို့ပါ။
ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ “အက္ခရား ငါးစင်း”ကို
Congratulations and Glad to see it..!
ဟုတ်​ကဲ့ ရုံးပိတ်​ရက်​မှာလုပ်​မယ်​ဗျ တနင်္ဂ​နွေ​နေ့ လုပ်​မှာပါ ရုံးသမား​တွေအဆင်​​ပြေ​အောင်​လို့ပါ ​ကျေး​ကျေးပါ :-) :-) :-)
Congratulations ပါ ကိုသော်ဇင်။
ပိုပြီး အောင်မြင်ပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဂုဏ်ယူပါတယ် ကို သော်ဇင်
ကောင်းကင် အကျယ် ကြီး ထဲ ကို ရွက်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့
ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်အောင် ဘယ်လောက်အားထုတ်ခဲ့ ရတယ်ဆို တာကို တွေး ပြီး ပိုလေး စားမိပါတယ်
​ကျေး​ကျေးပါ လက်​​ဆောင်​စာအုပ်​ပို့​ပေးပါမယ်​​နော်​ :-) :-)
စာအုပ်ထွက်တဲ့အဆင့်ထိ ရောက်ပြီဆိုတော့ ခရီးပေါက်နေပြီပဲဗျာ….
စာအုပ်ထွက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ အတွက်… ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဗျ ။
ရွာသူားတွေနဲ့ ..တွေ့ ဖို့ …ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး..ပြောစရာ ရှိတယ်ဗျ..။
ဆိုတော့… ကျနော်တို့ဖုန်းပြောရအောင်ဗျာ.. ။
မန်းမှာ ဝယ်ဖို့ စောင့်နေသူတစ်ယောက် ရှိတယ်ဆိုတာ စာရင်းတို့ထားပေးပါဗျာ..
စာပေနယ်မှာ ရေရှည်အောင်မြင်ထွန်းပေါက်ပြီး ကလောင်သွားဖြင့် ခရီးဆက်နိုင်ပါစေ…
Congratulations ပါ ကိုသော်ဇင်။စာအုပ်ကို မိတ်ဆက်ပွဲနေ့မှာရောင်းပါ..၀ယ်ယူအားပေးပါ့မယ်ဗျ